राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनामा सरकारले एकै पटक हात हाल्दा समस्या हुन्छ – Maitri News
राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनामा सरकारले एकै पटक हात हाल्दा समस्या हुन्छ
Mohan Bastola May 21, 2019
अहिले मुलुक संघीयतामा गएकाले अर्थविद् केशव आचार्य मुलुकको राजनीतिक सम्प्रुभुताको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको बताउनु हुन्छ । यसले पनि केही समस्या त अवश्य भएकै छ भन्ने उहाँको बुझाई छ । त्योसँगै अब कर्मचारी प्रशासनमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । यसले धेरै सहज बनाउने उहाँको ठम्याई छ । आचार्यासँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले यो बीचमा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने केही ऐनहरु ल्यायो । सरकारले ल्याएका ती ऐनहरु संसदबाट पारित भैसेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन , विदेशी लगानी सम्वन्धि ऐनलाई सम्शोधन गर्ने लगायतका काम पनि यो बीचमा भएका छन् । त्योसँगसँगै यो सरकारले बीचमा लगानी सम्मेलन पनि गर्न सफल भएको छ । यी कुरालाई हेर्ने हो भने केही सकारात्मक देखिन्छ । २५–३० वर्षदेखि व्यवसायीहरुले स्वदेशी वा विदेशी लगानीका लागि खोजिरहेको एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासलाई पनि सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत सुधारका कुरा पनि केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । यसरी हेर्दा यो सकारात्मक नै हो भन्न सकिन्छ ।
तर, चुनावका ताका घोषणापत्रले जुन खालको आशा जगाएको थियो । त्यो चाँहि अझै पनि हुन सकेको छैन कि जस्तो देखिएको छ । यो कुरामा चाँहि सरकारको केही कमजोरी देखिएको अवश्य हो अर्थात यो सन्दर्भमा चाँहि सरकार त्यति कामयावी भएन कि भन्ने गुनासो छ ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च क्षीण हुँदैहुँदै आएको छ । अहिले मुलुकमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । यसमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अस्ति नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि पुँजीगत खर्चमा प्रगती गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्नुभयो । यो निकै ठूलो चुनौति हो । यो सन्दर्भमा चाँहि आउने वर्ष सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो भने जुन हाम्रोमा विकाश प्रक्रियामा जुन निर्णय गर्ने चलन छ । त्यसलाई व्यापक रुपमा सरलीकरण गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियाले प्रभावित गर्छ होला । त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । अर्को भनेको निजामति सेवामा काम नगरे पनि बढुवा हुनुपर्ने, कर्मचारीमा अति राजनीतिकरण जस्ता कुरामा पनि सुधारको खाँचो देखिएको छ । त्योसँगै काम नगर्दा पनि कसैले सजायको भागिदार हुनुनपर्ने, प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन नपाउने जस्ता कुरामा पनि सुधारको व्यापक खाँचो छ । यो कुरामा पनि वर्तमान सरकारको ध्यान जान जरुरी छ जस्तो मलाई लागेको छ । विगतमा टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्न तीन–चार महिना लाग्ने परम्पराको पनि अब अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्र केही सुधारको संकेत देखिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । सकिन्छ भने विगतको त्यो झण्झटिलो प्रक्रिया खारेजी नै गरे पनि हुन्छ ।
अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । यो अवस्थामा पनि केही असजिलो भएको हो कि भन्ने पनि छ । यो सन्दर्भमा चाँहि के भन्नुहुन्छ ?
हो, अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । मुलुकको राजनीतिक सम्प्रुभुताको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयो अर्थात बाँढियो । यसले पनि केही समस्या त अवश्य भएकै छ । त्योसँगै अब कर्मचारी प्रशासनमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसले धेरै सहज बनाउँछ । यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले हरेक मन्त्रालयको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अधिकृतबाट टिप्पणी उठेर उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । अझ ठूलो–ठूलो कुरा त सचिवबाट मन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने प्रचलन छ । यो सहज तरिका होइन । यसमा पनि सुधारको खाँचो छ । लोकसेवा पास गरेर राजपत्रमा नाम निकालेर आएको शाखा अधिकृतलाई ठूलो अधिकार किन नदिने ? प्रश्न यहाँ छ । यो गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै सहज हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
तीन–चार वर्ष अघि सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौताको थालनी गरेको थियो । त्यो अहिले कतै पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । धेरै टाढाको कुरा छाडि दिनुहोस् । काठमाडौँ कै कुरा गरौँ । यहाँ राम्रोसँग बाटाघाटा बनेका छैनन् । हरेक आयोजनाहरु अहिले पनि अलपत्र परेका छन् । ती आयोजना सक्ने कुरामा पनि त्यति धेरै चासो गएको जस्तो देखिएको छैन । धेरै विलम्ब भएको छ । यो सबैलाई सरलीकरण गर्न कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादनसँग लगेर जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
त्यसका लागि कर्मचारीको हित मात्रै हेर्ने र कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा मात्रै ध्यान दिने कर्मचारी युनियनलाई सुधार गर्नुपर्छ । योसँगै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाने हो भने धेरै कुराको सुधार हुने देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यिनीहरुको काम सम्पन्न गर्नेलगायतका काममा नि सरकारको ध्यान जानु पर्ला नि होइन ?
हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामकरण गर्ने कुरा म अर्थमन्त्रालयम रहेकै बेला आएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसले समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्न सक्छन् । हामीले त्यति अवधारण अनुसार सात–आठ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएका थियौँ । भैरहवा विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा जलविद्युत आयोजनालगायत त्यतिबेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएको थियो । अहिले त्यो बढेर २०–२५ भन्दा माथि पुगेको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने मर्म बोक्नै सक्दैन । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शब्दकै अवमूल्यन भएको छ । त्यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २५–३० ओटा हुँदैनन् । मेरो अहिले पनि सरकारलाई सुझाव छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येका पनि सुरुमा चार–पाँच ओटा आयोजनालाई सम्पन्न गरेर फेरि अरु आयोजनामा हात हाल्दै जाने हो भने त्यसले सकारात्मक रुप लिन सक्छ । तर, सबैमा हात हाल्ने हो भने कुनै पनि सम्पन्न नहुने अवस्था आउँछ र सरकारले पनि काम गरेको देखिन्न । त्यो भयो भने खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । त्यहाँबाट भएको आन्दामिबाट सरकारले अरु आयोजना अघि बढाउन सक्छ । तर, यहाँ क्रमागत आयोजना भनिन्छ । त्यसले रातो कितावको आयतन बढाउने मात्र काम गरेको छ । त्यसैले हामी संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले मिलेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि । लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले इजाजत लिनका लागि सहज बाटो बनोस भनेका छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । यो लगायतका कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
Previous Previous post: काँग्रेसले बनायो ५८ सदस्यीय छायाँ सरकार
Next Next post: समुद्री सतह सोचेभन्दा निकै बढ्ने पूर्वानुमान, करोडौँ मानिस विस्थापित हुनसक्ने